ASMARA, Eritrea - Madaxwaynaha dalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed [Farmaajo] iyo wafdigiisa ayaa gaarey magaaladda Asmara ee caasimada Eritrea, fiidnimadda caawa oo Arbaco ah, halkaasi oo si wayn loogu soo dhaweeyay.
Madaxwayne Isaias Afwerki, Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed iyo xubno kale oo labadda dowladood ka socday ayaa wafdiga Farmaajo kusoo dhaweeyay Madaarka caalamiga ah ee Asmara, kadibna waxaa loo galbiyay Madaxtooyadda dalkaasi.
Saddex hogaamiye ayaa lagu wadaa inay yeeshaan shir saddex geesood ah, kaasoo ku qotomo xoojinta cilaaqaadka dhinacyaddan, iyo sidii loo dar-dar gelin lahaa heshiisyo ay dhowaan wada galeen.
Kulanka masuuliyiintaan oo haatanba socda ayaa waxaa la filayaa in marka uu soo idlaado ay warbaahinta si wadajir ah ula hadlaan, iyaga oo diiradda saaraya waxa kasoo baxa iyo ujeedka kulankooda.
Waa markii labaad oo Madaxwayne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ay booqasho ku tagaan dalka Eritrea, maadaama ay ahayd markoodii koowaad bishii July ee sanadkaan 2018.
WAR-SAXAAFADEED KASOO BAXAY VILLA SOMALIA: